काठमाडौँ,भदौ २२ । ०७४ असोज १७ को एमाले–माओवादी चुनावी गठबन्धन गर्ने निर्णयमा असहमित जनाएका गोपाल किराँती ०७४ फागुन १० गते तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निस्काशनमा परे । एमाले–माओवादीबीच पार्टी एकताका लागि फागुन ७ गते सात बुँदे सहमति बनेपछि त्यसको कडा विरोध गरेको किराँतीमाथि माओवादी केन्द्रले डण्डा चलायो । त्यसपछि किराँतीले माओवादी केन्द्र पुनगर्ठनको अभियान चलाए । जब एमाले–माओवादीबीच ०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भयो, किराँतीले आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रलाई ब्यँुताए ।
मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकताको प्रयास पनि भएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर किराँतीसँग गरेको छोटो कुराकानी गरेकी छिन् ।
भदौ १६ र १७ गते बसेको तपाईंको पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकले संसद विघटन, राष्ट्रिय सरकार र संविधान पुनर्लेखनको कार्यनीति अगाडि सार्यो । कागजमा मात्र सीमित पार्टीले यति ठूलो मुद्दा उठाउँदा गाह्रो लागेन ?
हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो बैठकद्वारा प्रस्तुत सडक सङ्घर्षको कार्यनीति राष्ट्रिय निकासका लागि हो । संविधान खारेज गर्ने नीति लिएको विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई राजनीतिक निकास दिएर अघि बढ्ने हो भने संविधान पुनर्लेखनको विकल्प छैन । संविधान पुनर्लेखनको बाधक विद्यमान संसद विघटन गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सरकार प्रक्रियाबाट अघि बढ्नु पर्छ । विचार र सिद्धान्तमा चल्ने राजनीतिक पार्टीले सर्वप्रथम आफ्नो नीति कागजमै तयार गर्ने हो । हामीले त्यति गरेका छौँ । सीमित पार्टीले ठूलो मुद्दा भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रले यो प्रस्ताव गर्यो । भावि कार्यनीति देश, जनता र समाजवादी क्रान्तिका लागि सही छ भने यसलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउने शाक्ति निर्माण हुन्छ । हामी माक्र्सवादी इतिहासको निर्माता जनसमुदाय हुन् भन्ने मान्यतामा दृढ रहन्छौँ । अतः संसद् विघटन र संविधान पुनर्लेखनको प्रस्ताव नेपाली जनतासमक्ष अघि सारेका छौँ । जनताले फैसला गर्नेछन् र राजनीतिक फैसला गर्न नेपाली जनता सक्षम छन् ।
तपाईंले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई विद्रोह गर्न आह्वान गर्नुभयो, त्यसो नगरे उनको राजनीतिक अवसान हुने दाबी गर्नुभयो ? किन यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुभयो ?
तर गृहमन्त्री बादलले विप्लव पार्टीका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई हथकडी लगाए भन्नेहरू छन् नि ?
हो, त्यसको नैतिक जिम्मा बादलले लिनुपर्छ । किनकि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । तर यथार्थ के हो भने गृहमन्त्रालयको अनुसन्धान विभाग सुरुमै केपी ओलीले खोसेर लगेपछि बादल आँखा र कान नभएका गृहमन्त्री बन्न बाध्य छन् । :रातोपाटीकी राजनीतिक संवाददाता बबिता शर्माले किराँतीसँग गरेको कुराकानीको एक अंश
अब कालिमाटी बजार कुनै माफियाले चलाएकाे भरमा चल्दैन : मातृका यादव
जनताले नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन्, त्यो विकल्प नयाँ शक्ति पार्टी नै हो : गंगानारायण श्रेष्ठ
प्रचण्डको दिल्ली दौड प्रधानमन्त्री बन्नका लागि, भयो यस्तो खुलाशा !
ओली राजले ल्याउने समाजवाद, गरीबको भागमा भोक र अशिक्षा नै पर्ने भो : खगेन्द्र संग्रौला